भरतपुर महानगरकी मेयर रेणुले प्रचण्डलाई बोलाएर सुरु गरिन यस्तो कार्य, स्थानीय रुष्ट — Sanchar Kendra
भरतपुर महानगरकी मेयर रेणुले प्रचण्डलाई बोलाएर सुरु गरिन यस्तो कार्य, स्थानीय रुष्ट
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले बिना कुनै गुरुयोजना पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बोलाएर तामझामका साथ चक्रपथको शिलान्यास गरेकी छिन ।
चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद समेत रहेका प्रचण्डले भरतपुरको पहिटानीमा पहिलो खण्डको र नारायणगढमा दोस्रो खण्डको शिलान्यास गरेका छन् ।
तर, चक्रपथको न गुरुयोजना छ, न डीपीआर नै बनेको छ । झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर बनाउन लागिएको चक्रपथ कहाँ-कहाँ भएर जान्छ ? कुन बस्तीलाई कहाँ छुन्छ ? पेट्रोल पम्प कहाँ कति दूरीमा हुन्छन् ? कुनै योजना महानगरसँग छैन ।
नत यसको डीपीआर नै तयार छ । ९५ किलोमिटर लामो चक्रपथ भनेर हचुवाकै भरमा भनिएको छ । भरतपुर महानगरका इन्जिनियर कृष्णबहादुर मल्ल ठकुरीले ९५ किलोमिटर होला भनेर अनुमान गरिएको बताए । उनले भने, ‘यो बढ्न पनि सक्छ ।’ चक्रपथ निर्माण कसरी गर्ने र चक्रपथ कहाँ कस्तो बन्ने भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उनले स्वीकार गरे ।
अनौठो के भने इन्जिनियर ठकुरीले नै महानगरको तर्फबाट सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय गरेर चक्रपथ निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कुमार घिमिरेले महानगरले भनेअनुसार सडक र ढलको लागत इस्टिमेट, डीपीआर, टेण्डरको काम गरेको बताए । तर, महानगरको सिंगो चक्रपथ कस्तो हुने भन्ने बारेमा आफूहरु पनि अनभिज्ञ रहेको उनको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीले पनि चक्रपथको ठोस योजना महानगरसँग नभएको स्वीकार गरेका छन् । महानगरपालिकाको एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार छिटो काम देखाउन विना योजना चक्रपथको निर्माण थालिएको हो ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय चितवनले प्याकेज एक र दुई गरी दुई स्थानबाट चक्रपथ र लिंक रोड निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।
बिकाशको नाममा बिना कुनै गुरुयोजना बजेट पचाउने हेतुले देखाउनका लागि मात्रै चक्रपथको शिलान्यास गरेको भन्दै स्थानीय भने रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्न समेत महानगरलाई आग्रह गरेका छन् ।
खासगरी पहिलो प्याकेजमा चक्रपथको एक खण्डसँगै पाँच वटा लिंक रोड पनि निर्माण गरिनेछ । यसको लागत ७७ करोड ८३ लाख छ । यसमा ६.५८ किलोमिटर चक्रपथ बन्नेछ । भरतपुरको गोन्द्राङदेखि १३ किलोमिटर तलबाट बल्ल चक्रपथको काम हुनेछ ।
बरण्डाभार क्षेत्रमा जंगलको किनारै किनार चक्रपथ बनाउने योजना महानगरको छ । जंगलको क्षेत्र भएकाले त्यहाँ त्यति बस्ती छैन । तर, बरण्डाभार क्षेत्र भएकाले निकुञ्जले पहिले पनि सडक कालोपत्रे गर्न दिएको थिएन । महानगरका एक इन्जिनियरका अनुसार निकुञ्जले ७ मिटरको पिच गर्न नदिएपछि तीन मिटरको पिच गरिएको हो । त्यसैले अहिले १३ किलोमिटर तल पुर्‍याएर चक्रपथ बनाइने भएको छ ।
प्याकेज-२ मा ७ वटा सडक तयार गरिने छ । जसमा चक्रपथ जम्मा १.९१ किलोमिटरको हुनेछ । बाँकी सबै लिंक रोड हुनेछन् । यसको लागत ६८ करोड २३ लाख छ ।
दुवै खण्ड गरी कुल ६० किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । रिङ रोड र लिंक रोड दुवैमा ७ मिटर चौडा कालोपत्रे हुनेछ । त्यसभन्दा बाहिर सडकको दुवैतर्फ कालोपत्रे नगरेको डेढ-डेढ मिटर किनार हुनेछ । तत्कालका लागि १० मिटर फराकिलो हुनेछ ।